ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » ဥရောပသတင်းများ » ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဈေးအသက်သာဆုံးနှင့်အသက်သာဆုံးမြို့ပြကြီးများ
ဥရောပသတင်းများ • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • အချက်အပြုတ် • ယဉျကြေးမှု • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ • ဇိမ်ခံသတင်းများ • သတင်း • အပန်းဖြေ • တာဝန်ရှိသော • စျေးဝယ် • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွားလာရေးဟောပြောချက် • ခရီးသွား Destination Update ကို • ခရီးသွားလျှို့ဝှက်ချက်များ • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား • သတင်းမျိုးစုံ
City break များသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းရှိသော်လည်းလမ်းအားလုံးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို့သောအားလပ်ရက်များသည်အခြားနေရာများထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။
နံပါတ်တစ်စျေးအသက်သာဆုံးမြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်အာဂျင်တီးနား၏မြို့တော် Buenos Aires ဖြစ်သည်။
စီးတီးအားလပ်ချိန်များသည်အမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးယဉ်ကျေးမှု၊ အစားအစာ၊ ညအိပ်ဘဝနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းအတွက်နှစ်ရက်မျှသာအချိန်ယူရမည့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
၄ င်းတို့သည်အလွန်စျေးနှုန်းချိုသာသည်။ သို့သော်အားလုံးသည်မြို့ပြအားချိုးဖောက်မှုသည်အခြားသူများထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။
ထို့ကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ထွက်ခွာရန်သင်စီစဉ်ထားပါကမည်သည့်မြို့များသည်စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သနည်း။ ရှာဖွေရန်ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများကကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးမြို့ ၇၅ ခုတွင်ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်း၊ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌စားသောက်ခြင်း၊ ဘီယာသောက်ခြင်းစသောကုန်ကျစရိတ်များအကြောင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။
1. Buenos Aires, အာဂျင်တီးနား
နံပါတ်တစ်ဈေးအရှိဆုံးမြို့ပြတွင်အာဂျင်တီးနား၏မြို့တော်ဖြစ်သည် Buenos Aires၀ ိုင်ပုလင်းတစ်မျိုး (ဒေါ်လာ ၃.၁၀) နှင့်ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တစ်လမ်းသွားလက်မှတ် (ဒေါ်လာ ၀.၂၇) ၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းအတွက်အသက်သာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကြီးမားသောစျေးနှုန်းချိုသာသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ရုံသာမကဤကျယ်ပြန့်သောစည်ကားလှသောမြို့တော်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောသမ္မတနန်းတော်၊ Casa Rosada၊ Teatro Colónအော်ပရာပြခန်းနှင့် MALBA ပြတိုက်အပါအဝင်များစွာရှိသည်။
2. အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ
Bosphorus ရေလက်ကြား၏ကမ်းခြေရှိဥရောပနှင့်အာရှအကြားရှိနယ်စပ်တွင်တည်ရှိပြီး Istanbul သည်ဒုတိယဈေးအသက်သာဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားလက်မှတ်အတွက် ၀.၄၀ ဒေါ်လာသို့မဟုတ်တက္ကစီအတွက်ကီလိုမီတာလျှင်ဒေါ်လာ ၀.၄၁ နှုန်းဖြင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်တည်ရှိသည်။ ။
အစ္စတန်ဘူလ်သည်တောင်အမေရိကနှင့်အရှေ့ဥရောပတို့တွင်တည်ရှိပြီးဈေးနှုန်းချိုသာသောဥရောပမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အရှေ့နှင့်အနောက်၏အကောင်းဆုံးသောပူနွေးသောဥရောပချိုးကိုလိုချင်လျှင်ကြည့်ရကျိုးနပ်ပေမည်။ !
နောက်ထပ်တောင်အမေရိကခရီးစဉ်သည်တတိယနေရာတွင်ရှိသည် ဘရာဇီးရှိရီယိုဒီဂျနေရို။ Rio သည် Copacabana သို့မဟုတ် Ipanema ကမ်းခြေများ၌အနားယူရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဒေါ်လာ ၁.၃၄ ဖြင့်ဘီယာကြမ်းခင်းအတွက်နာမည်အကြီးဆုံးသောဈေးအပေါဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
ဆွစ်ဇလန်သည်စျေးကြီးသည့်တိုင်းပြည်အဖြစ်လူသိများသည် zürich, အငှားယာဉ်များနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်စျေးအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည့်အတွက်၊ သင်လည်ပတ်လျှင်သင်၏ခြေထောက်ကိုဆန့ ်၍ လမ်းလျှောက်ချင်ပေလိမ့်မည်။
၂။ ရက်ယာဗစ်၊ အိုက်စလန်
Reykjavíkသည်ခရီးသွားရန်ဈေးအကြီးဆုံးသောမြို့များစာရင်းတွင်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ ထိုတွင်ဟိုတယ်တည်းခိုမှုအတွက်တစ်ရက်လျှင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ အောက်သာရှိသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာခန့်ကုန်ကျသည်။
၉။ ဂျီနီဗာ၊ ဆွစ်ဇာလန်
အခြားဆွစ်မြို့တော်သည်တတိယနေရာတွင်ရှိသည် ဂျီနီဗာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်လူတစ် ဦး လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀.၅၆ (၅ င်းသည်ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်အဆောက်အအုံမဟုတ်ဘဲအလယ်အလတ်တန်းစားစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ဖြစ်သည်)
အကယ်၍ သင်စျေးနှုန်းများကိုတက်နိုင်လျှင်၊ အဲလ်ပ်စ်နှင့်ဂျူရားတောင်တန်းများတွင်တည်ရှိသောလှပသောမြို့တစ်မြို့နှင့်အတူ Mont Blanc နှင့်ဂျီနီဗာရေကန်တို့မှလှပသောရှုခင်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။